Isu tinowanzoisa moyo yedu kuita chimwe chinhu, uye nechisikirwo, tinofungidzira kuti zvichave zvakanaka. Nekudaro, izvo hazvisi zvakadaro nguva dzose. Kunyangwe isu takaisa zvatinoita mukati mazvo, tichiri kufanira kuongorora. "Kukanganisa ndekwevanhu." Tinogona kukanganisa, uye imwe nzira yekuona zvikanganiso pane webhusaiti ndeyekuongorora.
SEO zvakare chimwe chinhu chatinoisa nguva yedu uye kushanda nesimba mukuita. At Semalt , tinokupa iwe ZVAKANAKA SEO masevhisi, asi isu tinotora zvakare nhanho yekudzoka uye kuongorora. Nenzira iyi, isu tinogona kuona mapundu anogona uye kugadzirisa, kuve nechokwadi iwe unowana hwakanyanya hwakanyanya webhusaiti kuongorora. Kuita kuti kupa uku kupedziswe, tinokwanisawo kuvaka yako webhusaiti uye kururamisa zvikanganiso zvese zvingave zvaive nazvo.
Chero bedzi iwe uine zvishandiso uye hunyanzvi, iwe unogona kuita kwako SEO kuzviongorora pachako, asi kana usingaite, zvakanaka kuti uwane rubatsiro kubva kune nyanzvi dzakadai Semalt. Mushure mezvose, iwe haudi kuti rako rose rakaoma basa riende pasi dhadha nehurombo SEO kuongorora.
Kuongorora SEO yako inovhara sarudzo dzakasiyana siyana, uye zvinogona kuve mutsauko pakati pekwakabudirira chirongwa cheSEO uye chakakundikana. Tarisa uone SEO, sekuyedza kuti munhu iyeye akucherechedze. Pakutanga, iwe wakaita senyeredzi iri kure mune yakasviba yakasviba, asi iwe unotanga kuedza. Pamwe chirongwa chako chekutanga hachishande, asi wozotangazve uye edza imwe nzira kudzamara waita zuva mune iye munhu. Izvo ndizvo izvo webhusaiti yese inoda, uye SEO kuongorora ndiyo chishandiso chekuona kana yako yekutanga nzira ichishanda. Pasina wongororo iyi, unogona kunge usingaone kuti maitiro ako ari kushomeka kunyangwe zvisiri izvo.
Asi ndiko kuti rese SEO kuongorora kuri nezve?
Pane adage iwe yaungadai wakambonzwa mubhizinesi repasi rino rinoshanda kune hupenyu pachahwo. Izvi zvinoenderera seizvi "kana usingakwanise kumuyera, haukwanise kuchinjisa" kuti zvive zvakanaka, iwe unofanirwa kuziva kuti wakanaka sei kana usiri, uri sei wakanyanya kunaka?
Kukwanisa kuyera kuti sei SEO yako iri kuita kwakakosha mukuwana yako webhusaiti kune yekutanga peji, uye yepamusoro-chikamu. Kufanana nekadhi rekushuma, rinonongedza zvaunogona uye kushaya simba kuti ugone kuvandudza. Neraki pamabhizinesi, unogona kutarisa kuti zvakanaka sei SEO kugona kwako kwemaitiro uine chishandiso chinonzi Google Analytics.
Kunyangwe isu tichikurudzira kuti ushandise Semalt, iwe unogona kuzviita uri wega, wakapihwa kuti iwe unoziva zviyero, mashandisiro ekushandisa maturusi, uye maitiro ekugadzirisa izvo zvinowanikwa pawebsite yako. Kana iwe usinga, taura nemutsa Semalt vatengi kutarisira kana timu yedu inoshamisa yekunyora pano. Tinogona kuongorora mhedzisiro yako ndokushandisa marongero ayo, ayo anokuisa panzvimbo yepamusoro iwe kwauri.
Asi kana iwe uchingoda kuverenga kumusoro pane izvo kuita SEO kuongorora zvinoreva, uri panzvimbo chaipo.
Kana iwe uine chinangwa chekuita SEO maitiro ekuongorora iwe, izvi zvinhu zvaunofanira kutarisa:
Nguva zhinji, ruzivo zvechokwadi isimba. Pasina ruzivo rwekuyera izvo zvakakosha, iwe unozongoguma uine zvakawanda zvawanikwa zvisinganyatsodiwa. Iwe unofanirwa kunzwisisa izvi usati wanyura mukati mechikamu chehunyanzvi hweSEO kuongorora.
Munguva kana mushure mekuongororwa kweSEO, zvakajairika kune newbies uye nyanzvi yekurapa kune imwe nguva kubata mu kusavimbika kwemamita ayo. Iwe unobatwa kazhinji nekunzwa kudada uye kupedzwa nehukuru hwako hwekuona peji rako. Nekudaro, iwe hausi kumira kuti uongorore kunaka kweiyo mapeji ekuona. Panzvimbo iyoyo, iwe unofanirwa kuyera kupfuura zvawacheka, kuyera kushamwaridzana zvakare.
Imwe inokosha yekudyidzana metric iwe yaunofanira kutarisa kune ndeye bounce rate. Izvi zvinoratidza huwandu hwevashandisi vanowana izvo zvavanenge vauya kubva kune imwechete peji uye kufambira mberi. Mune mamwe mazwi, inoratidza vakaverenga vakagutsikana vasina kuenda nemamwe mapeji pane yako webhusaiti. Kusiyana neizvo iwe zvaungave uchifunga, vashoma iyo nhamba yekukwira mitengo, zvirinani. Tese takatsvaga rumwe ruzivo, uye patino pusha link, tinofanirwa kuverenga kuburikidza nemapeji akati wandei tisati tawana ruzivo rwatinoda. Izvo hazvina kutonhorera, uye kazhinji, iwe unorasikirwa nemushandisi. Kana uchiongorora huwandu hwako hwekubhururuka, chero chinhu chiri pakati pe26% ne40% chakanakisa, uye chero chinhu chakakura kupfuura 70% chinoonekwa sechakashata, uye ungangofanira kushandira pane icho.
Iyo inoderera kana yakaderera chikamu chekukwira chakakosha nekuti inokuratidza kuti vaverengi vako vanofarira izvo zvaunofanira kutaura uye kuti unogutsa zvakakwana.
Zvemanyoro peji maonero
Kutarisa kutarisa kwema organic peji maonero zvakare imwe nzira yakakosha yekutarisa yako yese SEO kuita. Nhamba yepamusoro yekuona kwemapeji inoreva kuti SEO yako iri kuita huru, uye iri kuunza vashandisi vakawanda kuwebhusaiti yako. Nhamba yakaderera yekutarisa peji, kune rumwe rutivi, zvinoreva kuti webhusaiti yako haisi kuratidza kana mazwi ane hukama akatsvaga, kana webhusaiti yako haina kunaka kuti iite kuti vataridzi vaone.
Nguva zhinji, izvi ndizvo zvinhu zvinowanikwa pamusoro pevatsva vanoita SEO basa
Maitiro Eku Ongorora Webhusaiti Iyo SEO Performance
Kuongorora uchishandisa SEO Ongorora maturusi
Ichi ndechimwe chezvinhu izvo zvausingakwanise kuita pasina rubatsiro. Iwe haugone kuverenga kuburikidza newebhusaiti yako uye uuye nekutonga kwakarurama kwekuti zvakanaka sei SEO yako iri kuita. Kuti uite izvozvo, iwe unoda maturusi.
Pane zvishandiso zvakati kuti pane internet zvaunogona kushandisa kuongorora SEO yako. Kana iwe uchida kutarisa simba rako pane chimwe chinhu, iwe unogona kugovera basa iri kuSemalt. Tichawana yako SEO performance yakaongororwa pasina imwe nguva pasina kutora chero yenguva yako. Isu tichagadzirazve chero nekugadzirisa kwese kuti uve nechokwadi chekuti webhusaiti yako iri kumusoro, kwairi.
Imwe yeanonyanya kufarirwa ndiyo SEO analytics chishandiso ndiGoogle Analytics. Mukuwedzera kune iyo yekuti ndeye yeGoogle, iyo yakanaka inotyisa, zvakare yakasununguka.
Paunenge uchiongorora SEO yako, yekutanga danho iri kutora nhanho yekudzoka kuti utarise yako SEO kuita kwayo kwakawanda. Nekudzidza shanduko muhuwandu hwe organic traffic pamusoro penguva, unogona kuratidza kana yako SEO zano iri kushanda.
Kuongorora yako organic traffic
Iyi ndiyo nzira iri pachena yekuona kana yako webhusaiti SEO iri kuita nemazvo ndeyokuona huwandu wekubaya iwe unowana. Uku kuongorora kwakanyanya kunoshanda kune zvese organic uye yakabhadharwa webhusaiti kuiswa. Kana iwe uchishandisa Google Analytics, unogona kutarisa traffic yako nekuenda kunotora ipapo traffic yese wozoita chiteshi. Kana iwe ukatevera matanho aya, iwe unofanirwa kuona kuti traffic yako iri kuita sei chaizvo. Iwe unozogonawo kuona kuti zvakanaka sei organic traffic yako iri kuita uchienzanisa nekuendesa kana kubatanidza kubva kune midhiya media ads.
Zvinoreva kuti SEO yako haisi kunyatsoita nzvimbo yekudyara kana yekudonha ye traffic traffic, uye uchafanirwa kugadzirisa rako rewebhu zvirimo uye SO mazano.
Kuongorora backlinks yako
Nekukura kuri kuita webhusaiti yako, iwe unofanirwa kutanga waona kuwedzera kwehuwandu hwe backlinks kune yako webhusaiti. Nekudaro, zvingave zvakanaka kana iwe ukasakurirwa neizvi nekuti mhando yeiyi backlinks ine basa zvakare. Tarisa kune iyo domain domain webhusaiti iyo inopa idzi backlinks kune yako webhusaiti. Nekuongorora izvo zvirimo zvakaiswa iyi backlinks, iwe une pfungwa yezvinofungwa nevanhu webhusaiti yako. Paunonzwisisa izvi, iwe unogona kana kushandura iyi maonero kana kutora mukana wayo.
Ongorora SEO yako nemazita ayo akakosha
Panzvimbo pekuongorora iyo webhusaiti yako SEO nemaitiro ayo ese uye nehuwandu hwezvinodhwa zvaunowana, iwe unogona kuzviongorora nehuwandu uye hwemhando yemazwi akakosha anoshandiswa mariri. Izvo zvakati, Google Analytics haina basa rakakura kuratidza data keyword, saka iwe ungangoda kuwana imwe SEO analytics chishandiso.
Kana iwe ukaongorora webhusaiti yako uye uwane mugumisiro iwe usiri kufara nazvo, chinhu chekutanga chaunoita kufungidzira dambudziko. Nguva zhinji, ndeimwe yeaya maviri.
Sezvo keywords inowira pasi pezvinyorwa, ivo vanogadzira nzira iyo webhusaiti yako inoratidza nayo Google kana vashanyi nei webhusaiti yako ichidikanwa. Asi kuti uzive kuti makiyi ako akakosha sei, iwe unofanirwa kumhanya nekuongorora. Izvi zvinokuratidza kana mazwi ako asiri kutsvaga, kana asina kukwana kana akasasvika kune vako vateereri. Nenzira iyi, iwe unogona kushanda pane yako zvemukati nenzira uye kuwana izvo Clicks.
Kutsvaga ako masaiti akaputsika mapeji
Mapeji akaputsika ndeimwe nzira yechokwadi yekurasikirwa nevashanyi pane yako saiti. Kana vashanyi vasingakwanisi kuwana peji rine ruzivo rwavari kutsvaga, vanobva vangorega kufarira webhusaiti yako yese. Izvi zvinoreva kuderedzwa kwemotokari uye vangangove vatengi. Kugadzirisa mapeji akaputsika kwakakosha zvakanyanya, uye pane webhusaiti yemapeji anopfuura 100 0r 200, inova yakaoma zvakanyanya. Ichi chikonzero nei iwe uchifanira kuongorora yako webhusaiti kuti uvawane.
Ongorora yako kumhanya site
Speed site ndiyo imwe chinhu chikuru chaunofanirwa kuongorora kana kutarisa kunze kwekuverenga yako webhusaiti kuongorora. Google inofarirwa nekukurumidza webhusaiti, saka kana iwe uchida kuverengerwa kana kuratidzika pane yekutanga peji, webhusaiti yako inofanirwa kukurumidza zvakakwana. Kushandisa chiongorori chishandiso chepeji kumhanya kwemukati kunokuudza kuti inotora nguva yakareba sei iwe webhusaiti rako kutora. Kuvandudza yako webhusaiti kumhanyisa kunovandudza yako mushandisi ruzivo uye inowana vashandisi vakawanda kuti vagare pane yako saiti. Asi webhusaiti inononoka ichavhiringidza vashanyi vako uye vovaita kuti vabve pamberi pekuti zvemukati zviratidze pane avo skrini.